बर्दिवास । महोत्तरी जिल्लाका पुराना वामपन्थी नेता कुञ्जवीर लामाको ९३ वर्षको उमेरमा शनिबार दिउँसो निधन भएको छ ।
जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापकमध्येकै एक रहेका लामाको बर्दिवास–१३, बिजलपुरास्थित आफ्नै घरमा निधन भएको हो । लामा पछिल्ला केही महिनायता दम र मधुमेहले ग्रसित रहँदै आएका थिए ।
विसं १९८२ मा बिजलपुरामै जन्मनुभएका लामा जिल्लामा २००८ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो जिल्ला संगठन कमिटी गठन हुँदा सदस्य थिए । त्यसबेला एउटै कम्युनिष्ट पार्टी रहेका बेला जिल्लामा गठन भएको पहिलो संगठन कमिटीको सदस्य रहेकाले यहाँको हकमा लामा संस्थापक रहनुभएको जिल्लाकै बर्दिवास–१ का बासिन्दा हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य राजु खड्काले बताए ।
जिल्लामा नेकपाका संस्थापक रहनुभएका लामा २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सञ्चालन गर्न सात वामपन्थी पार्टीले बनाएका संयुक्त वाम मोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष थिए ।
विसं २०१९ मा कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएयता विष्णुबहादुर मानन्धर नेतृत्वको नेकपा (संयुक्त)मा आबद्ध रहँदै आएका लामा करीब एक वर्षअघि सो पार्टी तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा एकीकरण भएपछि सो पार्टी हुँदै अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आबद्ध थिए ।
लामाको निधनमा जिल्लाका सबैजसो राजनीतिक पार्टीले शोक वक्तव्य जारी गरेका छन् । स्व. लामाको आज बिहान ९ बजे बौद्ध परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गरिने छोरा धनराज लामाले जानकारी दिए ।
स्व. लामाका दुई पत्नीबाट चार छोरा र चार छोरीका साथै नातिनातिनी र पनातिपनातिनी गरी ३० भन्दा बढी रहेका छन् । लामाका दुवै पत्नीको भने यसअघि नै निधन भइसकेको छ ।
कट्रिना कैफका सबैभन्दा ठुला विवादहरुः बिकिनी काण्डदेखि सलमान खानको झापडसम्म
बलिउडकी सुन्दरी अभिनेत्री हुन् कट्रिना कैफ । मंगलबारबाट ३६ वर्षमा टेकेकी उनको जन्म सन् १९८३ जुलाई १६ मा हङकङमा भएको थियो । उनले लण्डनमा नै आफ्नो मोडलिङ सुरु गरेकी थिइन् ।
एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहकलाई ग्राण्डी अस्पतालमा ७.५ प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड र ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालबीच सेवा सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार बैंकका कर्मचारी, बैंकका डेबिट एवं क्रेडिट कार्डवाहक तथा सम्पूर्ण ग्राहकवर्गलाई ग्राण्ड
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।